Filed under: ဘာသာရေး, ဆောင်းပါး — 23 Comments	November 19, 2009
နံနက်မိုးသောက်အလင်းရောက်တဲ့အခါဂုဏ်တော်တရားနဲ့မေတ္တာပွားပြီးတောင်းဆုချွေပြုပတ္တိဒါန ဝေစုချလိုက်မယ်ဆိုရင်…….နံနက်ခင်းကို လှစေခြင်းပါပဲ။
နံနက်ခင်းကာလမို့ အေးမြလှတဲ့ လေပြေလေညှင်းလေတွေကို ရှုရှိုက်ရတာဟာလည်း စိတ်ရောကိုယ်ပါ လန်းဆန်းမှုကိုရရှိနေပါသည်။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကို နှစ်ရာကျော်သော ယောဂီတို့ရဲ့ ဓမ္မသံစဉ်တို့က မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကြီးမှသည် သတ္တလောကကြီးဆီသို့ အရုဏ်ဦးမှသည် နံနက်ခင်းဆီသို့ အလှတရားများဖြင့် ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်း ခညောင်းလို့လှပစေပါသည်။ရှေးဦးစွာထွက်ပေါ်လာသော ဓမ္မသံစဉ်သည်ကား မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော်တွေကို အာရုံမှာပုံဖော်၍ ရှိခိုးခြင်းဟူသော မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားစီစဉ်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံသော
“ဣမာယ ဓမ္မာနု ဓမ္မပဋိပတ္တိယာ ဗုဒ္ဓံ ပူဇေမိ။ဣမာယ ဓမ္မာနု ဓမ္မပဋိပတ္တိယာ ဓမ္မံ ပူဇေမိ။ဣမာယ ဓမ္မာနု ဓမ္မပဋိပတ္တိယာ သံဃံ ပူဇေမိ။
တဆက်တည်းမှာပင်-“ဣမံနော ပုညဘာဂံ သဗ္ဗသတ္တာနံ ဒေမ။
“အမျှရကြ၍ချမ်းသာကြပါစေသော်။ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေသော်။ကြောင့်ကြခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေသော်။ စိုးရိမ်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေသော်။စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနှင့် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကောင်းပဋိပတ်တို့ကို ကျင့်ကြံကြိုးစာ ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေသော်“ဟူ၍ မေတ္တာဓာတ်တွေ ဖြန့်ဝေလိုက်ကြပါသည်။
နောက်ဆုံးမှာတော့“ဤသို့ပြုရ မြတ်ပုညကြောင့် ချမ်းမြအေးကြည် ဘေးမဲ့မည်သည် ရွှေပြည်ထုတ်ခြောက် လမ်းမကောက်ပဲ ရောက်ရပါလို ထိုထိုဘဝ ကျင်လည်ရလည်း ဒုက္ခဘေးဒဏ် ရန်မာန်အပေါင်း မကောင်းဟူသမျှ မတွေ့ရပဲ သဗ္ဗဣစ္ဆာ မင်္ဂလာကို ရွယ်ကာတတိုင်း ရစေသော်။ယနေ့ယခု ပြုပြုသမျှ မြတ်ဘာဂကို မိဘဆရာ မျိုးသဟာနှင့် ကိုယ်မှာစောင့်ကြပ် ကိုယ်စောင့်နတ်က အရင်စ၍ ရှိသမျှလုံးစုံ ဘုံသုံးဆယ့်တစ် ဖြစ်ဖြစ်သမျှ ဝေနေယျတို့ ရကြပါစေ ပေးငှဝေသည် များတွေ သာဓုခေါ်စေသော်……. အမျှ…..အမျှ…..အမျှ…….ယူတော်မူကြပါကုန်လော့။သာဓု…သာဓု….သာဓု“ဆိုတဲ့ စကားသုံးလုံးက နေရာယူလိုက်ပါသည်။
ဤသို့ဖြင့် Good Morning ဖြစ်ကြစေရန် မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာမှ နှစ်ရာကျော်သော ယောဂီ သူတော်စင်တို့က နံနက်ခင်းကို အလှဆင်လိုက်ကြပါသည်။ရတနာသုံးတန် ကံနှင့်အကျိုး အားကိုးယုံကြည် သူတော်စင်တို့၏ နံနက်ခင်းကို လှစေသော ဓမ္မသံစဉ်သည် သာယာချမ်းမြေ့လှတာမို့ တစ်သက်မမေ့နိုင်စရာ ကြည်နူးဖွယ် တစ်ခုပါပဲ။ အသံအားလုံးတွင် နှိုင်းယှဉ်စရာ ထပ်တူပြုစရာ ဓမ္မသံစဉ်လောက် ကောင်းတာ ဘယ်အခါ ဘယ်နေရာမှ မရှိပါဘူး။ နံနက်ခင်းကို ဓမ္မသံစဉ်ဖြင့် လှပစေ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးတရားရိပ်ဝယ် ပျော်ပိုက်နိုင်ကြပါစေကြောင်း စာစီပေါင်းလို့တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
(ခွင့်တလအပြန် အချိန်လေးရလို့ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာခွဲ သဓ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ၌ ရဟန်းခံ တရားအားထုတ်ရင်းမှ တရားဓမ္မသင်ပြပေးသော ဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တာနန္ဒ (ဓမ္မာစရိယ၊ B.A, B.Sc, Dip in English) အားရှိခိုးပူဇော်ဂုဏ်ပြုရင်း တရားအလှုတော်မြတ်ကိုကုသိုလ်ပြုအပ်ပါသည်။ချမ်းလင်းနေ)
23 Comments: ညရဲ့ကောင်းကင်
November 19, 2009 at 6:07 am	>အလွန်ကျက်သရေအပေါင်းဖြင့် ပြည့်စုံလှပါကုန်၏။နံနက်ခင်းကို တရားဓမ္မဖြင့် လင်းစေခြင်းသည် မည့်သည့်အသံသာတို့နှင့်မျှ နှိုင်းယှဉ်၍ မမှီနိုင်ပါတကား။ကျွန်တော်လည်း မဟာစည်တရားရိပ်သာမှာ ငယ်စဉ် ကိုရင်ဘ၀က ၄၅ ရက်တိုင်တိုင် တရားစခန်းဝင်ခဲ့ဖူးပါသည်။အလွန်တင်းကျပ်၍ တရားအမှုပြုလုပ်ခြင်းကို ဦးစားပေးသော ရိပ်သာတစ်ခုပါ။ယခုလို မျှဝေပေးခြင်းအား သာဓုခေါ်ဆိုပါ၏။သာဓု…သာဓု…သာဓု
November 19, 2009 at 7:04 am	>သာဓု လာခေါ်ပါတယ်..
November 19, 2009 at 7:09 am	>သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ကိုချန်းလင်းနေ။
November 19, 2009 at 7:36 am	>ကိုချမ်းရေ..ဗမာပြည် ပြန်သွားလိုက်တာ တော်တော်အကျိုးတွေ ရှိလာတယ်ပေါ့ .. သာဓု ခေါ်ပါတယ် … ဆက်ပြီးတော့လဲ မမေ့မလျော့ အားထုတ်နိုင်ပါစေ…နံနက်ခင်းတိုင်းလဲ တရားသံတွေနဲ့ လှပ နိုင်ပါစေ …
November 19, 2009 at 7:37 am	>ငါ့အစ်ကိုအခွင့်အရေးကိုအမှန်အကန်အသုံးချခဲ့တာဘဲ။သာဓုခေါ်ပါတယ်ရှင်….
November 19, 2009 at 8:29 am	>နေ့ တစ်နေ့ ရဲ့ အစ ကဘဝတစ်ခုရဲ့ အစ ပါပဲလို့ ။ဒီလိုပဲ နေ့ ပေါင်းများစွာ၊ဘဝပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးခဲ့ ကြပေမဲ့စုဆောင်းခဲ့ မိကြတာကတော့အပူရောင်အာရုံတွေပါပဲလို့ ။ ဘဝ တစ်ခုရဲ့ အစဖြစ်တဲ့နေ့ တစ်နေ့ ရဲ့အစကို အခုလိုမျိုးပဲ ကောင်းသော၊အေးသော စ ခြင်းမျိုးတွေ နဲ့ သူ စ စ နေနိူင်ခဲ့ ရင် အကောင်းဆုံးပါလို့ဆိုခဲ့ ရင်း သာဓု အကြိမ်ကြိမ် ပဲ ခေါ်ခဲ့ မိပါတယ်ဗျာ…။
November 19, 2009 at 8:31 am	>သာဓုဗျာ သာဓု သာဓုး)အသစ်တိုင်းရောက်လာမှာပါ
November 19, 2009 at 9:38 am	>ကိုချမ်းလင်းနေရေ…အားကျတယ်ဗျာ…။တစ်ကယ်ပြောတာပါ…။ကျွန်တော် ဟိုး…၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်တုန်းကတော့ သင်္ကြန်တွင်း…ရဟန်းဝတ်ရင်း… မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားစခန်းဝင်ခဲ့ဖူးတာကို သွားသတိရမိတယ်ဗျာ…။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ…နော့်…။ဝေမျှပေးထားတာတွေအတွက်ပါ…။
November 19, 2009 at 10:49 am	>မဟာစည်တော့ မဝင်ဖူးဘူး ကိုရေချမ်းရေ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက သွားတာ ကျောင်းပိတ်ရင် အဲဒီကိုပဲ အမြဲသွားတယ် ကျက်သရေ ရှိပါတယ် ကိုရေချမ်းရေ…
November 19, 2009 at 12:47 pm	>မနက်ခင်းတစ်ခုရဲ့ အလှတရား ငြိမ်းချမ်းမှု သံစဉ်တွေကို ကိုချမ်းရှာတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့…ဝမ်းသာကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်..ကျနော်ကိုယ်တိုင် မလုပ်နိုင်သေးဘူး ဆိုတော့ ကိုချမ်း ရခဲ့တဲ့ အချိန်လေးမှာ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကို သာဓုခေါ်ပါတယ်ဗျာ… ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့်ဖိုးစိန်
November 19, 2009 at 6:47 pm	>ကောင်းတယ်ဗျာစိတ်ချမ်းသာစရာပါပဲအေးချမ်းလိုက်ပါဘိ …ပျော်ပါစေ
November 19, 2009 at 6:55 pm	>ကိုချမ်းရေမင်္ဂလာနံနက်ခင်းလေးကို လာဖတ်သွားပါတယ်…အားကျမိတယ်…ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် သုံးခဲ့တဲ့ ကိုချမ်းကိုလဲ လေးစားပါတယ်…မင်္ဂလာရှိသော နံက်ခင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…မနှင်း
November 19, 2009 at 10:52 pm	>အမိမြေပြန်ပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ လုပ်ခဲ့တာ သာဓုခေါ်ပါတယ် ကိုချမ်း……. တစ်နေ့တာလုံး စိတ်ချမ်းသာနေနိုင်ဖို့ မနက်စောစောစီးစီး မေတ္တာပို့ အမျှဝေလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးလန်းဆန်းနေတာ အမှန်ပါ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ရခဲ့တယ်ပေါ့း)
November 19, 2009 at 11:01 pm	>သာဓု သာဓု သာဓုနွေးနေခြည်
November 20, 2009 at 1:27 am	>မြန်မာလူမျိုးတွေ အတွက် နံနက်ခင်းမှာ မင်္ဂလာအရှိဆုံးအသံလို့ပြောရမယ်။ မနက်စောစောမှာ တရားခွေ ပဌာန်း ခွေတွေကို လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေက ဖွင့်ထား ရင်တောင် တကယ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတာပဲဗျာမနက်အစောကြီးမှာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် အေးအေးချမ်းချမ်း တရားမှတ်ရတာ သိပ်ကောင်းတာ ပါပဲဗျာ..။ကျနော်လည်း ဒီတခါ ပြန်ရင် စိတ်နှလုံး ပိုအေးချမ်း အောင် ၀င်ပါအုံးမယ်။ဒီစာစုလေးအတွက်လည်း နှစ်သက် သလို ကျေနပ်အားရ မိပါတယ်။
November 20, 2009 at 2:02 am	>ကိုချမ်း မြန်မာပြန်ရောက်ခိုက် ရဟန်းခံလာသေးတယ်။ ကောင်းလိုက်တာ။ သာဓုပါနော့။ နေ့တနေ့မှာ မနက်ခင်းလေးက အေ၇းကြီးဆုံးပါပဲ။
November 20, 2009 at 4:11 am	>ကိုချမ်း က အမိမြေ ခဏပြန်ခိုက် တန်ဖိုးအရှိဆုံးသော အရာကိုပြုမူဆောင်ရွတ်နိုင်တာ ချီးကျုးပါတယ်။ သာဓုလည်း ခေါ်ဆိုပါတယ်
November 20, 2009 at 8:33 am	>မင်္ဂလာရှိသော နံနက်ခင်း မှအစ တစ်နေ့လုံး မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးတွေ ကို ဖန်းတီးပြီး ခံစားနိုင်ပါစေလို့ .. တန်ပြန်မေတ္တာပို့ ခဲ့ပါတယ်ဗျာမိသားစုအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ
November 20, 2009 at 1:26 pm	>သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ပါဗျာ….ကိုချမ်းလည်း အနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ အစဉ်အဆက် တပည့် ပေပဲ….ဆရာကောင်းတပည့် ဆိုတော့ ပန်းကောင်းပန်နိုင်ရမှာပေါ့ ဗျာ …( လောကုတ္တရာပန်း၊ မဂ်၊ဖိုလ် ပန်းပွင့် ပန်းခိုင်ပေါ့ ဗျာ…) ….ကိုချမ်းခွင့် သွားနေတုံးတင်ခဲ့ တဲ့ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ ရဲ့ ကြည်နူးကြည်ညိုဖွယ်ပုံရိပ်လေးပါ…http://www.kopeter.blogspot.com/2008/08/blog-post_01.html
November 20, 2009 at 1:27 pm	>ကျက်သရေ ရှိလိုက်တဲ့ ကဗျာလေး တိုတိုလေးနဲ့ တန်ဖိုးရှိပါ၏ ။ခင်မင်လျှက်မနှင်း
November 20, 2009 at 9:33 pm	>မင်္ဂလာရှိတဲ့ နံနက်ခင်းမှာ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အတွက် အေးချမ်းကြည်နှုး ရပါတယ်။ ယောဂီသူတော်စင်တို့ရဲ့ အေးမြတဲ့ တရားသံတွေကို နားဆင်လိုက်ရသလိုပါပဲ။ လောကရဲ့ အေးချမ်းတဲ့ ဒီတရားရိပ်လေးကို အချိန်ရှိမှ အချိန်ရမှ မဟုတ်ပဲ ရတဲ့ အချိန်လေးမှာ အားထုပ်နိုင်တဲ့ ကိုချမ်းလင်းနေ ကိုလည်း လေးစားမိပါတယ်။ နွယ်လည်း အောင်ဓမ္မရိပ်သာမှာ သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း တရားစခန်းဝင်ခဲ့ဘူးတယ်။ အခုတော့ မပြန်ဖြစ်တော့ဘူး။ ရသလောက်ပဲ အားထုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ တရားအားထုပ်တဲ့ အချိန်မှာ ရရှိတဲ့ အေးချမ်းမှုမျိုးကို တသက်လုံးရရှိနိုင်ပါစေနော်။ ကိုချမ်းလင်းနေ ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်တွေကို အခုလို မျှဝေပေးလို့ ထပ်တူ ညီတူ"သာဓု သာဓု သာဓု" ခေါ်ဆိုသွားပါတယ်။ခင်မင်လေးစားလျှက်
November 21, 2009 at 9:40 am	>လှပတဲ့ နံနက်ခင်းမှာ တရားသံကိုကြားရနာရတာအရမ်းကို ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်အစ်ကို ရေ . . . ခုလို အစ်ကိုကြားခဲ့နာခဲ့ သိခဲ့ တာလေးတွေကိုပြန်ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ . . .
November 22, 2009 at 4:37 pm	>သာဓုပါဗျာ…ခဏပြန်တဲ့အခိုက် သံသရာအတွက် တခုခု ကျန်အောင် ယူလာနိုင်တယ်..(ဒါကြောင့် ဦးရီးပြောင်ပြောင်နဲ့ လူတယောက် တွေ့လိုက်ပါတယ် ထင်နေတား)းဝ)